Olik'aratra - Wikipedia
Ny olik'aratra dia vondrona fela elektirônika mifandray matetika amin'ny alàlan'ny olik'aratra voatonta ary ny tanjony dia manao asa iray. Izay ny antony iheverina ny olik'aratra fa boaty maintsy misy :
Fidiran'ny aratra famelomana azy,
Fidirana tokana na maro,
Fivoahana tokana na maro.
Matetika, ny olik'aratra dia tohizin'ny sistema elektirômekanika mba afahana mampiasa na mijery ny valin'ny fanodinana. Ny felan'ny olik'aratra dia matetika atao eo ambonin'ny zavatra tsy mampita aratra (bakelita) misy ny mpampita aratra, olik'aratra voatonta, sy/na voavondrona anaty olika voafintina anaty.
Ny olik'aratra dia ohatra ny hita fa sarotra foana. Kanefa, vita joro maro mizaka tena fotsiny izy, izay lazaina hoe olik'aratra elektirônika. Izy ireo ihany dia manana joro (tsindrindray lazaina hoe « étages"). Amin'ny farany, tonga any amin'ny joro fototra isika, ary izy ireo dia brika ilay olik'aratra. Ireo foto-joro ireo dia manana joro manokana : ny fela elektirônika . Ity ny lisitra ny joro hita amin'ny elektirônika :
ny fanamafisana aratra
Ny tanjon'ny famelonana dia manome ny aratra ilaina mba iasan'ny olik'aratra. Izy izany dia misy :
mpaka (pirizin'aratra na loharanon'aratra hafa), mamadika ny hery ho aratra
« étage» fanovana, afahana manakaiky ny herinaratra eo amin'ny ilaina (oh. :220 V→12 V), ny famadihana ny aratra dia matetika ataon'ny mpanova aratra.
« étage fipasohana » ny aratra, mba hitovy foana ny herinaratra (tsy misy parazita, anaty aratra mitohy). Io fipasohana io dia atao amin'ny alàlan'ny kadobo iray na maro.
« étage» famarinana ny herinaratra, mba afahana manana herinaratra famelonana mitovy na inona na inona ny tanjaka hanin'ny olik'aratra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Olik%27aratra&oldid=964622"
Dernière modification le 10 Janoary 2019, à 16:50
Voaova farany tamin'ny 10 Janoary 2019 amin'ny 16:50 ity pejy ity.